शब्दकोश: यस्तो गतिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन !?
चर्चा गर्न लागेको कुरा सानो हो । त्यसो त, कलिलो तामा नै छिप्पिएर बाँस हुने भएकाले सानै कुराको पनि मूल्य हुने ठानेर यो फेहरिस्त उतार्न लाग्दैछु ।
सप्‍ताहान्तको एक दिन राजधानी नजिकैको चोभार डाँडातिर घुमघाममा निस्किएको थिएँ कार्यालयकै एक साथीसँग । कामकाजी दुनियाँमा रहेपछि फुर्सदले दिनचर्यामा हत्तपत्त चियाउने नाम नै लिँदैन । साप्‍ताहिक बिदाको बिसाउनी पनि कहिले त अतिरिक्त कार्यभारले स्वाहा हुन्छ !
आफ्नै वाहन नहुँदा पुरानो बसपार्कबाट दक्षिणकाली मन्दिर जाने बस रोजियो । शुक्रबारे दिन, मध्याह्‍नको मन्द समय । बिना कुनै तयारी, चोभारको टुङ्गो नै थाहा नभई घुम्ने थलो कता-कता भन्ने जानकारीबिनै अन्धाधुन्ध कुदेका थियौँ । यात्राको रोमाञ्चकता भनेको यो पनि हो एउटा, जानुपर्ने ठाउँको नामबाहेक केही थाहा नहोस् । अन्दाज र अव्यवस्थित पारामै लरखराउन पाइयोस् । स्वाभाविकै हो, अलपत्र पाराको हिँडाइले केही हैरानी त हुन्छ आफूलाई, तर त्यो सास्तीलाई रहस्यमय यात्राको मजाले कता हो कता उछिन्छ ।
कालिमाटी, बल्खु हुँदै कीर्तिपुर विश्‍वविद्यालयको किनार हुँदै उकालो लाग्यो बस । यही हो चोभार भन्ने बसभित्रको हल्लाको पछि लागेर झरियो जङ्गल जस्तो ठाउँमा । तर अलिकता तलै झरिएछ, थोरै पैदल पेल्नुपर्‍यो ।
डाँडा-पाखाको विस्तारित फाँट रहेछ चोभार । पाखाबाट ओरालो हान्निँदै र कतै भित्ताको बाटो उक्लिँदै टहलिनमा रमायौँ । नाङ्गा पहाड भए पनि हामीलाई भने त्यही नै रुपसी लाग्यो ;)
यस्तो थुम्काथुम्कीको सयर सहरमा कुँजिएको पखेटा फिजाउन काफी थियो
बसबाट उत्रिएपछि चोभारको मूल डाँडा चढ्नुअघि देखिएको काठमाडौँको सहरी फाँट
घुमघामको लागि मात्र होइन, फिल्मको सुटिङको लागि पनि आकर्षक केन्द्र
सहरको पिंजडाबाट मुक्त भएपछि फुकेको पङ्ख
‘जोडी जङ्सन’को रूपमा पनि खुबै चल्तीको ठाउँ रहेछ चोभार
अब पालो सुस्ताउने : यो चाहिँ क्यामेरा आफैँले क्लिक गरेको
भोकको बेला सिद्धेला भन्दै गनेर खानुपर्ने म:म: हामीले भने कनेर खायौँ
फर्किने बेला भोकले रन्थनिएको आँखालाई ‘कटेज रेस्टुरेन्ट’ ले लोभ्याए । घाम पनि छानामाथिबाट ओइलिएर गइसकेको ओसिलो बेला एउटा ‘कटेज’मा छिर्‍यौँ । कटेजभन्दा बाहिर खुला ठाउँमै राखिएको टेबल र मेच रोजाइमा पर्‍यो । चकमन्न थियो रेस्टुरेन्ट परिसर । चिसोमा तात्तातो म:म: ले पेट सेक्ने मोह जागेर अर्डर गरियो दुई प्लेट चिकेन स्टिम म:म: । भोकको बेला पर्खाइ पनि कति लामो भएको हो ! बल्लतल्ल पौने घन्टामा प्लेटहरू टेबलमा आइपुगे । प्लेटमा म:म: सजाएको पनि कसरी हो, ठूलो प्लेटमा नसुहाउँदो गरी छरेर गोलो घेरा लगाइएको म:म: खोलामा कोसेढुङ्गा जस्तै देखिन्थ्यो । फेरि म:म: पनि चोभारको नाङ्गो पाखा जस्तै कस्तो रूखोसुखो हो ! म:म: बडो यातनापूर्वक खाइयो । म:म:को बाहिरी पत्र आगोछेउ सुकाएर ल्याएको जस्तै सुख्खा थियो । अरू रेस्टुरेन्टतिर पनि यस्तै हालत हो कि भन्ने अड्कलमा पुगियो । कुनै पाखाको कमेरो माटो कस्तो छ भन्ने जान्न नमुनास्वरूप कुनै एउटा फग्लेटाबाट माटो लिएर हेर्ने त हो नि ! पैसा तिर्ने बेला पनि मजा आएन । पैसा असुल नभए जस्तो !
नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को दौडमा छ मुलुक । काउन्टडाउन सुरु भइसक्यो । १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकाङ्क्षा राखिरहँदा आन्तरिक पर्यटनलाई पनि उपेक्षा गर्न नमिल्ला । सानो-सानो ठाउँमा पनि घुमघाममा जाने र सहर आसपासको स्थलमा पनि आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाबारे स्थानीयबासी तथा व्यवसायीहरू जागरुक हुनु जरूरी छ । त्यो ठाउँ कस्तो हो भन्ने समग्रमा सन्देश जाने भनेको स्थानीय रहनसहन, व्यवहार र खानपानको उपलब्धताले पनि हो । नत्र नाङ्लो पसलमा चुरोट बेच्न बसेजस्तो यस्तो हालतमा त कसरी होला आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन ? आन्तरिक पाहुनालाई खुसी नपारी बाहिरकालाई खुसी पार्ने हाम्रो व्यग्रताको पनि के अर्थ ?
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, November 30, 2010
Milan December 02, 2010